Chilli(Junction Square Branch)
Kaung Kyite (Sin Ma Lite Branch)
FUDO - 81st Street
Yuding Hot Pot
9 STAT REASTARUNT
Feel (Myanmar Food)
Lotteria (Waizayandar Branch)
Tom Yam Koong- Mdy International Airport
Minn Lan @ Baho Street
Fresh Thai (Mayangone Branch)
Tom Yam Koong- 86th Street
Kain Kyi Restaurant
Chatime (Mayangone Branch)
Shwe Myo Taw (Kyauktada)
Mr.Chef (Dagon Centre-2 Branch)
Sein Muu Sal
Kone Htet (Hlaing)
Magic Bubble Tea (Tamwe)
Neo (Thamine Branch)
Mr.Chef (San Pya Branch)
Happy Family (Happy)
Sushi House (Sanchaung Branch)
Thai Pot II
Kaung Kyite (Myaynigone Branch)
Parami Pizza - Mayangon
Green Elephant - Avenue
Shwe Palin (Kabar Aye Gamone Pwint)
Happy Family (Kan Daw Min Branch)
1920 Industrial Restaurant (Vintage Luxury Yacht Hotel)
Cafe' de Angel (Junction Square)
Rich Cafe' (KanDawGyi Branch)
Season (AKK Branch)
YKKO (Thamain Bayan)
Swe Mahar (Sanchaung)
Black Sky (Botahtaung Branch)
The Pizza Company (Junction Maw Tin)
YKKO (People's Park)
Brasserie @ Sedona
Kaung Thant (Yankin Branch)
Golden Light Resturant
Shiawase Sushi II
Swensen's Myanmar (Ocean-Shwe Gone Tine)
Yangon Bake House - Inya
Shan Ohh Si
Happy Cafe (South Oakkalapa)
Golden Duck (Kyauktada)
Rich Cafe' (Sanchaung Branch)
Summer Palace @ Sule Shangri-La
Blue Galaxy (BG)
Ma Li Hku (Kandawgyi Branch)
Thai Tain Wai
Min Lan @ Parami
Min Lan @ Way Za Yan Dar Road
Pasta Mania Myanmar
M Cake House
Min Lan @ Inya
Yunan (Nay Pyi Taw)
Shwe Yee (Myanmar Snacks)
Little Tokyo @ Hlaing
Asagiri Sausage & Resturant
Kone Htet (Kyauktada Branch)
Shwe Palin (Junction Square Branch)
El Dorado (Thingangyun Branch)
GOLDEN PEARL Food & Drinks
Ice Berry (Myaynigone Branch)
Bj Cafe (Bahan)
KSS Fried Chicken(Pabedan)
Shar Joon Pyan (Kaw Yay Noodle)
Cafe Saarbruken (Hledan Branch)
Malaysia (Kamayut Branch)
ICB Ice Cream Bar (Thamine City Mart Branch)
Ya Kun Kaya Toast (Yankin)
Season (Nay Pyi Taw Branch)
SP Bakery @ 26Street
Golden Duck (8 miles)
Sa-Lone7Si Chuan Hot Pot & BBQ
Yamasaki Japanese Resturant
Sone Mhat Zon
KSS(Mingalar Taung Nyunt)
Spice Brasserie @ Park Royal
Shwe Kaung (Kamaryut Branch)
SP Bakery @ 80th Street
Swe Mahar (Insein)
Malaysia (Sanchaung Branch)
Emporia @ Chatrium Hotel
After Work Bistro and Bar
Pwint Thit San
Royal Pavilion @ Novotel
SP Bakery @ 62 Street
Ah Hmat Ta Ya
Golden Duck (Mandalay)
Yummy Restaurant & B.B.Q
Thiri Thu Kha I
Unique Myanmar (26)
Royal Lake I
Shwe Yon Lay (Yankin Branch)
FUDO - 62nd Street
CHOK SOMBOON SEAFOOD THAI RESTAURANT
Frozee Gelato Creamery
Keco @ People
SHAKE(North Okkalapa Branch)
Sharky's (Food & Passion)
Anyar Su Lan Htate
Ang's Restaurant : Malaysian
Kaung Kyite (Sanpya Zay Branch)
FROLICK (Taw Win Centre)
El Dorado (Bo Myat Tun Branch)
Rainbow (Shwe Gone Dine Branch)
Piano Bar @ Hotel Parami
Ice Berry (Tamwe Branch)
Restaurant Café Café @ Hotel Parami
Shwe Ye ( Myaynigone)
Season (Mingalar Taung Nyunt Branch)
Thaw Thar Snack
Mawlamyaing Daw Ngwe Kyi
Thai Kitchen (Junction Square Branch)
YKKO (La Pyae Wun)
Doe Lay(Kyuntaw Branch)
Thai Pot III
Fuji Japanese Restaurant (Market Place Branch)
FUDO - 74th Street
Chilli( (9Mile Branch)
Kaung Latt Yar
VIP Food Center and Restaurant
SP Bakery @ Kywel Sal Kan
Mingalabar Food Corner
Season (Bahan Branch)
Smiley Pork Stick-copy
KeeMar Tin Win
The Rangoon Bar (Peperoni Pizzeria)
SP Bakery @ 73th Street
K-sinpo Vegetable Chicken
Parisian (Kyimyindine Branch)
YKKO (South Race Course Road)
Family (Botahtaung Branch)
No Bi No Ni
KK Fast Food
Peacock Lounge @ Sule Shangri-La Hotel
12th Street Mote Thi
Thiri Thu Kha II
Pan Swel Taw (Nay Pyi Taw Branch)
Smart Garden - Kandawgyi
Mya Sabei (Mingalar Taung Nyunt Branch)
YKKO Kyay Oh & BBQ House (30 Street)
Malaysia (South Dagon Branch)
Aung Se Sein
KFC (Dagon Center II)
El Dorado (Dagon Branch)
Season (Pazundaung Branch)
The Lab (Wine & Tapas Bar)
36th Street Kyay Oh
Shwe Nyaung Pin (Pazundaung Branch)
Cafe JJ - 73
Kone Htet (Dagon Branch)
Dagon Myanmar Restaurant (Ma KhinLay)
Wine Bar MARU
The Pizza Company (Ocean-Shwe Gone Dine)
Pan Thay Restaurant
Restaurant in Township
အဝင်းတို့၊ မေရီတို့ခဏလေးဖယ်… :P စားဖို့သောက်ဖို့အတွက် တောင်ဥက္ကလာမှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေစုပေးထားတယ်
ဟော့ပေါ့ Review လေးတင်ပါမယ်ဆိုမှကွာ ရာသီဥတုကမိုးအေးအေးနဲ့.... ဒိုးခပါပဲ :P :P
ပင်လယ်စာကြိုက်တဲ့သူတွေ စိတ်ခိုင်မှဒီစာလေးကိုဖတ်နော်… ဖတ်ပြီးတာနဲ့စားချင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ အက်မင်လည်းမတတ်နိုင်လို့ပါ :3
ဘယ်လိုတောင်တန်တဲ့ပရိုးမိုးရှင်းတွေပေးထားတာလဲ Pasta Mania ရယ်
စားလည်းစားမယ်။ သောက်လည်းသောက်ပါမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ပူစရာမလိုတဲ့နေရာလေးတစ်ခု သိချင်ကြလား?
စက္ကန့်သုံးဆယ်အတွင်းမှာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ (၁၉၂၀)ခုနှစ်ကိုပြန်ရောက်သွားစေမယ့် နေရာလေးတစ်ခု <3
အနောက်တိုင်းဆန်ဆန်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နေ့လည်စာကို ဘယ်မှာစားကြမလဲ?
ပင်လယ်စာရခိုင်ချဉ်စပ်ချက်လေးတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာလေးနဲ့ပဲစားပြီး ဗိုက်ကားသွားစေမယ့်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ထပ်တွေ့ပြီ
ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့လည်းစားရမယ်၊ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လည်းပြင်ဆင်လို့ရတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးလေးလည်းစားလို့ရမယ့် သင့်ရဲ့ မနက်စာအတွက်ပါ……
The Chicken Rice Shop ရဲ့ မီနူးဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ အရသာလန်းလန်းလေးတွေ
ဒီနေ့က Pay Day ဆို… ဘာစားရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေသူတွေအတွက် ကိုရီးယားဆိုင်အသစ်လေးရှိတယ် !
မိုးလေးခိုပြီး အေးအေးဆေးဆေးလေးထိုင်လို့ရမယ့် Wifi Free ရတဲ့ Coffee ဆိုင်လေးတွေ
ရုံးသုံးရက်ပိတ်တော့ ဘယ်ဆိုင်မှာဘာလေးတွေစားကြမလဲ ?
The Beer Bar ရဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထူးထူးဆန်ဆန်းလေးက ဘာဖြစ်မလဲ ?
မြေနီကုန်းက ချဉ်စပ်ခေါက်ဆွဲ ဆိုင်
Pizza Hut ရဲ့ 369 Campaign လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ ပရိုမိုးရှင်းအသစ်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မာလရှမ်းကော ဆိုင်များစုစည်းမှု
လေဆိပ်ဘက်ကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဘာစားမလည်း…. ?
‘Singapore Kitchen’ ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဆိုင်ခွဲ (၄၆)လမ်းမှာထပ်မံဖွင့်လှစ်ထား
Yakiniku နဲ့ Shabu Shabu စားချင်ရင် Novotel မှာ ‘TakumiYa’ ရှိတယ်…
နဝဒေးလမ်းထဲမှာ ရှမ်းအစားအစာဆိုင်တစ်ဆိုင် ထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိ
ပင်လယ်စာကောင်းကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက် ‘Seafood Paragon’
ကိုရီးယားဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်အကြောင်းရေးချင်ပါတယ် #Yoogane ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုပါ
Feel ညဈေးတန်း ဒီဆိုင်လေးကတော့ တော်တော်များများ ပြောနေကြတာ ကြာပြီ
ရန်ကင်းက ‘Hungry Bird’
ဒီတစ်ခေါက်စမ်းချောင်းဘက်မှာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ #Thai_Village ဆိုတဲ့ ထိုင်းဆိုင်လေးအကြောင်းပြောပြမယ်
“TGIF ပါ… MyLann ဘော်ဒါတို့ရေ “
ဆူရှီ၊ ဂျပန်အစားစာကြိုက်သူတွေအတွက် #Color_Stones က #MR.ITCHII
လှည်းတန်းစင်တာက #ရာမန်_မွန်းစတား (Ramen Monster)
စကောထမင်းစားချင်နေသူတွေအတွက် တော်ဝင်စင်တာက “ထိုင်းတိမ်ဝေ” တဲ့။
" ရန်ကုန်မြို့ ရှိ သီးသန့် ခန်း ဝန်ဆောင်မှု ရနိုင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်များ"
သီတင်းကျွတ်ပြီးပြီဆိုပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူကြီးသူမတွေကို မကန်တော့ရသေးတဲ့လူတွေရှိသေးရင် !
တာမွေ၊ ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်းထဲက #ရွှေကောင်းကင် မီနီဟော့ပေါ့ဆိုင်လေးကိုမှတ်မိကြသေးလား ?
ကျန်းမာရေး လိုက်စားတဲ့ သူတွေ အတွက် Healthy Meal တွေ ရနိုင်တဲ့ ဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်ကို ရှဲပါရစေ။
တရုတ်တန်းသို့တစ်ခေါက်
တောင်ကြီး အင်းလေး အစားအစာတွေ ရရှိနိုင်တဲ့ #အင်းလေးအမှတ်တရ ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်
မာလာဟင်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Spicy House ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးအကြောင်းလေးပြောပေးမယ်နော်။
ဒီတစ်ခေါက် Down Town က The Brunch Society ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးအကြောင်းပြောပြမယ်နော်
ထိုင်းအစားအစာလေးတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် စမ်းချောင်းလမ်းထဲက My Siam ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ။
TGIF မှာ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ နေရာလေး တစ်ခု ရှာနေသူတွေအတွက် ဒီမှာ Epic Bar & Restaurant
ထိုင်းစာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် လမ်းမတော်က Thai Style ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးထပ်တွေ့ထားတယ်ဗျို့
ကုမ္ပဏီနှစ်ပတ်လည်ပွဲတွေ၊ မိတ်ဆုံစားပွဲလုပ်ချင်သူတွေအတွက် သင့်တော်စေမယ့်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်ရှင်
အကင်ကြိုက်တဲ့ MyLann မိတ်ဆွေများအတွက် ရန်ကုန်မြို့ မှာ ရှိတဲ့ အကင်ဆိုင် ကောင်းကောင်းလေးတွေကို စုပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒဂုံဘက်ကိုရောက်တိုင်း အမြဲတမ်းသွားစားဖြစ်တဲ့ Heaven Pizza
ဒီတစ်ခေါက်တော့ Myanmar Plaza က Snow House ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးအကြောင်းပြောပြပေးမယ်နော့
မနက်ပိုင်းရုံးသွားခါနီး မနက်စာစားရအဆင်ပြေဖို့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကြောင်းပြောပြပေးမယ်ရှင့်။
တောင်ဥက္ကလာက အောင်သီဟဆိုတဲ့ ရှမ်းဆိုင်လေး
ပူပုနွေးနွေးလေး နဲ့ ကွေ့ သယို ကြိုက်သူများအတွက်
ပိတ်ရက်လေးမှာ ထူးရဲ့ချစ်ရတဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ
ရိုးရာအခင်းအကျင်းနဲ့ကိုးကန့် ခုပ်ဖူ စားသောက်ဆိုင်
ရန်ကုန်မြို့ မှ လူကြိုက်အများဆုံး ကော်ဖီဆိုင် (၁၀) ဆိုင်
Heaven Pizza in Super Sunday
Tian Xiang Hotpot
Bamboo Korea BBQ
မြေနီကုန်းက Wa Tote Kyee Hotpot Buffet
ကချင်ထမင်းသုတ် နဲ့မြစ်ကြီးနားဆန်ခေါက်ဆွဲ
သုမင်္ဂလာလမ်းပေါ်က အောင်သီဟ ရှမ်းဆိုင်လေးပါ
ရန်ကုန်မြို့ မှ ဟော့ပေါ့ ဆိုင်များ
Mr.Chef @ Taw Win Center
Yangon international Hotel ဝင်းထဲက The Cup Cafe ဆိုင်လေးပါ။
ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး ရှမ်းအစားအစာဆိုင်လေး ကို Mylann မိတ်ဆွေများကို ဝေမျှပေးချင်လို
Australia on the menu 2016 @ Park Royal Hotel
Italian Food at Heaven Pizza
Hot Pot @Park Royal Hotel
Candy ချစ်သူတို့ အတွက် Candy Land
ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းက Café Paradise
ပင်လယ်စာ ကောင်းကောင်း ကြိုက်သူများအတွက်
စမ်းချောင်းတစ်ခွင်မှ လူကြိုက်များတဲ့ ဆိုင်များ
Craft Cafe - Coffee Shop
BBQ @Shwe Pan Seng
အကင်ကောင်းကောင်း နဲ့ သောက်စရာ နေရာကောင်းကောင်းရှာနေသူများအတွက်
Park Royal က Hi Tea Set ပါ။
Deli Ruby YGN
ပူပြင်းတဲ့ အချိန် နွမ်းလျနေရင် သံပုရာရည် တစ်ခွက်သောက်ပါ
Hot Pot ကောင်းကောင်း စားချင်သူများအတွက်
Shan Noodle Shop @Nan Htike
Thai Food @Yuki Thai Restaurant
Angry Potato @Cafe Genius
Rakhine Mont Te
Dessert & Snack @The Milk Bar
Tea Time @Rangoon Tea House
March လအတွင်းမှာ Promotion ပေးနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ဆိုင် (၁၀)ဆိုင်
Korea Food @Ahjumma Kitchen
Shake Food House
Pizza @Parami Pizza
My House Restaurant @Taunggyi
Thai Food @Thai Kitchen
Japanese Hot Pot Restaurant @Ohsama
Super Sunday Cooking Time
Chinese Restaurant @PanWady
Dim Sam @Oriental house
New place~New Taste @ Thai Kitchen
One of the Japanese Restaurant in town
Sunday Special Brunch @ The Square
MyLann Foodie @ Mina-O
Unforgettable Memory @ Lashio Shan Noodle
MyLann Foodie @ Mr.Thai (Extraordinary Thai Cuisine)
Restaurant "Café Café" @ Hotel Parami Yangon
The Square (Food by Nature) @ Novotel Hotel
Delicious Hot Pot @ Shwe Lar
One Fine Day @ Nervin Cafe'
MyLann Foodie @ BBQ Chicken Secret Garden
Delicious Dining at Bawarchi Indian Fine Dining Restaurant
Great Mexican Food at Agora Mexican Restaurant
My Lunch Program #3 - ရေမုန်ညှင်း၊ ၀က်နံရိုးဟင်းချို အရည်သောက်
The Food Library - Italian Fine Dining in Bagan
Dining Experience at Tummour Myanmar
My Lunch Program #1 - ပြည်ကြီးငါး၊ မှို၊ ငရုပ်ပွကြော်
Foodie's Dining Experience at Royal Jade
BBQ Chicken New Opening at Junction Square Secret Garden
Grilled Salmon Experience at The Manhattan Fish Market
First and Only Russian Restaurant KVAS Yangon
MyLann မှတင်ဆက်သော ရဲဝင့်သူ၏ "သူမြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့သောအစားအစာများ" Series #11
The Cave - A Newly Opened Bar for Your Complete Nightout Experience
MyLann Foodie's Review #5 (ROOF Liquid Gastronomy Bar)
MyLann Foodie's Review #3 (Yoogane Junction Mawtin)
MyLann Foodie's Review #1 (Rangoon Tea House)
MyLann မှတင်ဆက်သော ရဲဝင့်သူ၏ "သူမြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့သောအစားအစာများ" Series #10
MyLann မှတင်ဆက်သော ရဲဝင့်သူ၏ "သူမြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့သောအစားအစာများ" Series #9
MyLann မှတင်ဆက်သော ရဲဝင့်သူ၏ "သူမြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့သောအစားအစာများ" Series #8
Aung Min Khant's Birthday & MyLann Staff Party at Agora
MyLann & Marrybrown ပူးပေါင်းတင်ဆက်မယ့် "ဆေးရောင်စုံခြယ်ရင်း ၀ါးတီးဆွဲကြမယ်"
ရဲဝင့်သူ၏ "သူမြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့သောအစားအစာများ" Series #7
"Hello December Special Program" from BBQ Chicken
ရဲဝင့်သူ၏ "သူမြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့သောအစားအစာများ" Series #6
Mexican အစားအစာအကောင်းစားတွေ ရနိုင်တဲ့ Agora
ကိုရဲဝင့်သူ၏ "သူမြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့သောအစားအစာများ" Series #4
ကိုရဲဝင့်သူ၏ "သူမြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့သောအစားအစာများ" Series #3
ကိုရဲဝင့်သူ၏ "သူမြည်းစမ်းကြည့်ခဲ့သောအစားအစာများ" Series #2
နှမ်းဆီရဲ့ကောင်းကျိုး (၈) မျိုး
ကြံရည်စစ်စစ်၏ အကျိုးကျေးဇူး (၉)မျိုး